သူခိုး ဓါးပြ ဒုစရိုက်သမားများကပါ လေးစားဦးညွှတ်ရတဲ့ မြန်မာအနုပညာရှင်နှစ်ဦး – အနုပညာရပ်ဝန်း
၁ ။ ထူးအိမ်သင်
ထူးအိမ်သင်ဟာ ညဘက်ဘီယာဆိုင်ကအပြန်..ကားတစ်စီးနဲ့ တိုက်မိပါတော့တယ်သူနဲ့အတူ နီကိုရဲလည်း ပါပါတယ်တဖက်က ကားသမားတွေက တုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းရိုက်အောင် လာကြသောအခါနီကိုရဲကတော့ ကားလော့ချထားဖို့ပြောပါတယ်..
ထူးအိမ်သင်ဟာ ကားတံခါးကိုဖွင့်ပြီးထွက်တွေ့တဲ့အခါ….ဟာ… ကိုငှက်ကြီးဟဆိုပြီး တုတ်တွေပစ်ချ ပြေးဖက်ကာ သူတို့မှားတာ ဖြစ်ပါကြောင်း တောင်းပန်ရင်း..ဘီယာတောင်ထပ်လိုက် တိုက်ခဲ့ပါသေးတယ် တဲ့ဗျာ…… ။
သူခိုးတစ်ယောက်ဟာ အိမ်တအိမ်က မီးခံသေတ္တာကို ဖောက်ထွင်း ပြီးပါပြီ…ပစ္စည်းတွေထုတ်ပြီး ဆင်းဖို့ကြံစဉ်..သူခိုးဟာ အတွေးဝင်လာပါတယ် ။ ဒီလောက်ခမ်းနားကြီးကျယ်တဲ့ အိမ်ကြီးမှာ ဘယ်သူတွေများ နေကြသလဲလို့ သိချင်စိတ်နဲ့..
အိမ်ရှင်အခန်းထဲထိသွားကာ ဝင်ကြည့်ပါတော့တယ်.. သူအရမ်းလေးစားချစ်ခင်ရတဲ့ကို သားကြီးအိမ်ဖြစ်နေသောအခါ..ပစ္စည်းတွေကို ကုတင်ပေါ်တင်ထားခဲ့ပြီး စာတစ်စောင် ရေးထားခဲ့ပါတယ်…
ကျနော်ကိုသားကြီး ပရိတ်သတ်ပါ…ကိုသားကြီး အိမ်မှန်းမသိလို့ဝင်ခဲ့မိတာ တောင်းပန်ပါတယ် ခမျာတဲ့…ဗျာ…. ။ အခုတော့ နှစ်ယောက်လုံး လူ့လောကမှာ မရှိကြတော့ပါဘူး ။
ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့အနုပညာက ပရိတ်သက်တွေ နှလုံးသားထဲမှာ ထင်ကျန်ဆဲပါပဲဗျာ ။ ယခုလို အချိန်ပေးဖတ်ရှုပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ် ။
ထူးအိမ်​သင်​ဟာ ညဘက်​ဘီယာဆိုင်​ကအပြန်​..ကားတစ်​စီးနဲ့ တိုက်​မိပါတော့တယ်​သူနဲ့အတူ နီကိုရဲလည်​း ပါပါတယ်​တဖက်​က ကားသမား​တွေက တုတ်​​တွေနဲ့ဝိုင်​းရိုက်အောင်​ လာကြသောအခါနီကိုရဲက​တော့ ကားလော့ချထားဖို့​ပြောပါတယ်​..
ထူးအိမ်​သင်​ဟာ ကားတံခါးကိုဖွင့်ပြီးထွက်တွေ့တဲ့အခါ….ဟာ… ကိုငှက်​ကြီးဟဆိုပြီး တုတ်တွေပစ်​ချ​ ပြေးဖက်​ကာ သူတို့မှားတာ ဖြစ်​ပါ​ကြောင်​း ​တောင်​းပန်​ရင်​း..ဘီယာ​တောင်​ထပ်​လိုက်​ တိုက်​ခဲ့ပါ​သေးတယ်​ တဲ့ဗျာ…… ။
သူခိုးတစ်​​ယောက်​ဟာ အိမ်​တအိမ်​က မီးခံသေတ္တာကို ဖောက်​ထွင်​း ပြီးပါပြီ…ပစ္စည်​းတွေထုတ်​ပြီး ဆင်​းဖို့ကြံစဉ်​..သူခိုးဟာ အ​တွေးဝင်​လာပါတယ် ။ ​ဒီ​လောက်​ခမ်​းနားကြီးကျယ်​တဲ့ အိမ်​ကြီးမှာ ဘယ်​သူ​တွေများ နေကြသလဲလို့ သိချင်​စိတ်​နဲ့..
အိမ်​ရှင်​အခန်​းထဲထိသွားကာ ​ဝင်​ကြည်​့ပါ​တော့တယ်​.. သူအရမ်​း​လေးစားချစ်​ခင်​ရတဲ့ကို သားကြီးအိမ်​ဖြစ်​​နေ​သောအခါ..ပစ္စည်​းတွေကို ကုတင်​​ပေါ်တင်​ထားခဲ့ပြီး စာတစ်​​စောင် ​ရေးထားခဲ့ပါတယ်​…
ကျ​နော်​ကိုသားကြီး ပရိတ်​သတ်​ပါ…ကိုသားကြီး အိမ်​မှန်​းမသိလို့ဝင်​ခဲ့မိတာ ​တောင်​းပန်​ပါတယ် ခမျာတဲ့…ဗျာ…. ။အခုတော့ နှစ်ယောက်လုံး လူ့လောကမှာ မရှိကြတော့ပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ရဲ့အနုပညာက ပရိတ်သက်တွေ နှလုံးသားထဲမှာ ထင်ကျန်ဆဲပါပဲဗျာ ။